HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tshiluba Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
Tokony hivavaka amin’i Jesosy ve ny Kristianina?
Tsia. I Jesosy mihitsy no nampianatra hoe i Jehovah no tokony hivavahana. Nanome modely koa izy ka nivavaka tamin’ny Rainy. (Mat. 6:6-9; Jaona 11:41; 16:23) Nivavaka tamin’Andriamanitra àry ny mpanara-dia azy voalohany fa tsy tamin’i Jesosy. (Asa. 4:24, 30; Kol. 1:3)—1/1, pejy 14.
Inona no azo atao isan-taona mba hiomanana amin’ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy?
Miezaha mba haharaka ny famakiana Baiboly mifandray amin’ny Fahatsiarovana. Manompoa bebe kokoa. Saintsaino koa ny fanantenana nomen’Andriamanitra antsika ary mivavaha momba izany.—15/1, pejy 14-16.
Inona no niafaran’ireo gadra roa lahy, izay samy nitantara ny nofiny tamin’i Josefa?
Nilaza i Josefa fa haverina amin’ny asany ilay mpandroso zava-pisotron’i Farao. Ilay mpanao mofo kosa hovonoin’i Farao ary hahantony. Tanteraka ireo tenin’i Josefa ireo. (Gen. 40:1-22)—1/2, pejy 12-14.
Inona ilay fanomezana tsy nampoizina azon’ireo rahalahy any Japon?
Nahazo bokikely vaovao misy ny bokin’i Matio izy ireo. Nalaina tao amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao izy io. Zaraina eny am-pitoriana izao io bokikely io ary maro ny olona tsy zatra mamaky Baiboly tia azy io.—15/2, pejy 3.
Inona no zava-nisy tamin’ny taonjato voalohany ka nanamora ny fielezan’ny vaovao tsara?
Tsy dia nisy ady nandritra an’ilay vanim-potoana natao hoe Fandriampahalemana Romanina. Tsara koa ny lalana. Ny teny grika koa no be mpampiasa, ka mora ny nitory ny vaovao tsara. Nahare izany hatramin’ny Jiosy niely eran’ny Fanjakana Romanina. Afaka nampiasa ny lalàna romanina koa ny mpianatra mba hiarovana ny vaovao tsara.—15/2, pejy 20-23.
Nahoana ny tena Kristianina no tsy mankalaza Paka?
Ny nahafatesany no nasain’i Jesosy nankalazain’ny mpianany, fa tsy ny nitsanganany. (Lioka 22:19, 20)—1/3, pejy 8.
Nahoana ny bokintsika tato ho ato no tsy dia miresaka intsony momba ny tandindona sy izay mifanitsy aminy?
Milaza ny Baiboly fa tandindon’ny zavatra lehibe kokoa ny olona sasany fahiny. Iray amin’izany ilay resahin’ny Galatianina 4:21-31. Tsy tsara anefa ny manombantombana na tonga dia milaza hoe misy mifanitsy aminy ny zavatra iray. Na izany aza, dia afaka mandray lesona avy amin’ny olona na zava-mitranga resahin’ny Baiboly isika. (Rom. 15:4)—15/3, pejy 17-18.
Nahoana no mahaliana ilay sombin-taratasy papyrus hita tao anaty fako tany Ejipta?
Misy andininy avy ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona ao amin’izy io. Angamba tsy ela be taorian’ny nanoratan’i Jaona ny Filazantsarany no nanoratana azy io. Manaporofo izy io fa tsy miova ny Baiboly hatramin’izao ary azo atokisana.—1/4, pejy 10-11.
Ny Baiboly mihitsy no milaza fa tena ilaina ny fandroahana. (1 Kor. 5:11-13) Nahoana izy io no ilaina? Satria hahazo voninahitra ny anaran’i Jehovah, hadio foana ny fiangonana ary mety ho tonga saina ilay nanao ratsy.—15/4, pejy 29-30.